GnuCash 4.0 inosvika iine mashoma shanduko, asi inosimbisa yayo nyowani CLI yekushandisa | Linux Vakapindwa muropa
Mazuva mashoma apfuura kusunungurwa kwe iyo nyowani vhezheni yevakakurumbira yemahara yemari accounting accounting "GnuCash 4.0", chinova chishandiso chakanakisa icho chinopa maturusi ekutevera mari nemari, kuchengetedza maakaundi ebhengi, kutonga ruzivo pamasheya, mari, uye mari, uye kuronga zvikwereti.
Iyi software yakagadzirirwa kuve nyore kushandisa, asi iine simba uye ichichinjika, GnuCash inoda inokutendera iwe kuteedzera maakaundi ebhengi, masheya, mari uye mari. Sezvo ichikurumidza uye inonzwisisika kushandisa serejista cheki, zvinoenderana nemisimboti yeaccount accounting kuti ive nemabhuku akaenzana uye nemishumo chaiyo.
1 GnuCash 4.0 main nhau
2 Maitiro ekuisa GnuCash 4.0 paLinux?
2.1 GnuCash iri paSnap
GnuCash 4.0 main nhau
Mune vhezheni nyowani, imwe yezvinyorwa zvikuru ndeye chishandiso chitsva «gnucash-ehl» iyo inobvumidza kuita akasiyana mabasa emari, maitiro ekuvandudza iwo rondedzero yemitengo uye kugadzira mashumo, pamutsetse wekuraira pasina kutanga graphical interface.
Nhaurirano nyowani "Transaction Association" inokurudzirwa uye mukana wekuwedzera masangano kumaaccount, reverse postings, mavovoice uye mavavha zvinoitwa.
Column upamhi izvozvi zvakachengetedzwa, kwete yeakaundi yega yega, asi maringe nemhando dzemagazini, senge mari, masheya, maakaundi anobhadharwa uye anotambirwa, madhairekitori evashandi nevatengesi.
Kutsvaga kwakavandudzwa: mhedzisiro izvozvi zvine simba kugadzirisa sezvo iwe uchinyora mutsara wekutsvaga. Tsigiro yeAQBanking 6 yakawedzerwa uye kuendesa kweOFX kwakagadziridzwa.
Kodhi yekodhi yakagadzirwazve; kubvira kuvaka GnuCash compiler nerutsigiro rweC ++ 17 standard yave kudiwa, semuenzaniso, gcc 8+ kana Clang 6+.
Python zvisungo zvave kuwanikwa munharaunda uye tambo dzadzo dzinowanikwa mukushandura.
Bvumira masangano kuwedzerwa kune mavovoice. Iko kusangana chaiko kana kuripo kunowedzerwa sebhatani bhatani rinoratidzwa pazasi pezvinyorwa.
Chiratidzo chave kuratidzwa mukutengesa murogi kana vaine chinobatanidzwa uye font yakasarudzwa inotsigira chiratidzo.
Iyo yeXX yekupinza mafaera ikozvino inogona kuendesa anopfuura rimwe faira panguva.
Iyo nyowani Supbmenu Multicolumn mushumo menyu ine yekare tsika yakawanda-ikholamu mushumo uye mushumo mutsva weDashboard ine nhoroondo dzeakaundi dzemari nemari, mari yemari nemari, uye chidimbu cheakaundi.
Wakawedzera rutsigiro rweUK VAT uye GST yeAustralia kune Revenue-GST mushumo. Sarudzo dzekuzivisa dzinoshanduka kubva kumaakaunzi enhoroondo kuenda kunzvimbo yekutenga nekutengesa maakaundi kubvumidza chaiyo kutaurwa kwekutenga kwemari. NB Izvi hazvienderane neshanduro dzakapfuura dzechirevo uye zvinoda kumutsiridzwa kwenzvimbo dzakachengetedzwa.
Finalmente kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo nezve iyi nyowani vhezheni yeGnuCash 4.0, unogona kutarisa iwo ruzivo mune yaro yepamutemo chirevo. Iyo yekubatanidza ndeiyi.
Maitiro ekuisa GnuCash 4.0 paLinux?
Iyi accounting system inowanikwa mune angangoita ese maLinux kugovera, kuti iwe ugone kuiisa neumwe weinotevera mirairo, zvichienderana nekugovera kwako:
Kana iwe uchida kuisa maapplication kuburikidza neSnap mapakeji, GnuCash ine yayo snap package, chete chete kukanganisa ndizvo izvozvi haisati yagadziriswa kune yayo nyowani vhezheni mukati meSpap Store.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » GnuCash 4.0 inosvika iine mashoma shanduko, asi inosimbisa yayo nyowani CLI kushandiswa
makadii vanhu, ndinga vhura sei gnucash faira kubva kune yechinyakare vhezheni kubva kwayakachengetedzwa?
Rimwe zuva ndakavhura ndikachengeta shanduko kufaira, kubva pavhezheni 4.2 paWindows 10. Nhasi ndinoedza kuvhura iyo faira kubva OpesSUSE Leap 15.1, uko yazvino vhezheni yeGnuCash inowanikwa iri 3.0 uye handikwanise kuvhura iyo faira nekuti yakachengetwa mu imwe yepamusoro-to-date vhezheni. Ndozvipedza sei izvi ???
Mozilla inoramba ichitadza. Tinoda bhurawuza riri nani, kwete kurongeka kwezvematongerwo enyika